टोखा हत्याकाण्ड : सुदीक्षा जीवित हुँदै पठाओमार्फत कोलोनी छिरेकी थिइन् शर्मिला
उमेश केसी हत्या र सुदीक्षा गिरी मृत्यु प्रकरणमा नयाँ–नयाँ तथ्य खुल्दै गएको छ । गत शुक्रबार टोखास्थित ग्रान्डी भिल्ला कोलोनीमा बस्दै आएका उमेश र सुदीक्षा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए ।
प्रहरीकाे प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सुदीक्षाले नै उमेशको हत्यापछि आत्महत्या गरेको खुले पनि त्यसको कारण भने अझै पत्ता लागेकाे छैन ।
हत्यापछि पोस्टमार्टम रिपोर्टले सुदीक्षा २ महिनाकी गर्भवती रहेको र सुदीक्षाभन्दा उमेशको हत्या १२ देखि २४ घण्टाको अन्तरमा भएको देखायो ।
उमेशको हत्या नै भएकाे अनुसन्धानले देखाए पनि सुदीक्षाले करिब २४ घण्टाकाे समयमा के गरेकी थिइन् ? त्यो रहस्यमै छ । उनले पनि आत्महत्या गरेका कारण त्यसभित्रको धेरै पाटो खुल्न नसकेकाे अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।
तर, यसबीचमा सुदीक्षाले उमेशको हत्यापछि त्यही रात सुदीक्षाले आफ्नी दिदी शर्मिलालाई कोलोनीमै बोलाएको खुलेकाे छ । उमेशकाे हत्या र सुदीक्षाको मृत्यु अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीका अनुसार बिहीबार राति सुदीक्षाले उमेशको हत्या गरेकी थिइन् ।
हत्या भएकै रात उनकी दिदी शर्मिला ८ बजेतिर कोलोनीमा पुगेको खुलेको छ । अनुसन्धानमा खटिएका ती प्रहरी अधिकारीले भने, ‘हत्या भएकै राति शर्मिला उमेश र सुदीक्षा बस्दै आएको घर पुगेको देखिन्छ । शर्मिलाले त्यसबेला सुदीक्षासँग जम्मा २ मिनेट बिताएकी देखिन्छ । शर्मिला पठाओ प्रयोग गरेर त्यहाँ पुगेकी थिइन् र त्यही राइडरसँग फर्किएकी छिन् ।’
ती अधिकारीका अनुसार घटनाकै रात शर्मिला पुग्नु र उनले घटना गोप्य राख्नुमा केही रहस्य छ । यसअघि शर्मिलाले आफू सुदीक्षाको फोन लामो समयसम्म पनि नउठेपछि कोलोनीमा पुगेको बयान दिएकी थिइन् ।
तर, अनुसन्धानले उनको भूमिका शंकास्पद देखाएकाे छ । उमेशका दाई हिमेशले यसअघि शिलापत्रसँग भनेका थिए, 'पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उमेशको मृत्यु सुदीक्षाको भन्दा एक दिनअघि भएको खुलेकाे थियाे । सुदीक्षाले नै उमेशको हत्या गरेको भए पनि एक दिनसम्म सुदीक्षा कसरी बाँचिन् ? अन्तिममा आफू पनि मर्ने अवस्थामा कसरी पुगिन् ?' उनले शर्मिलाको भूमिकामाथि संशय प्रकट गरेका थिए ।
शर्मिलाले प्रहरीलाई बताएअनुसार उनी शुक्रबार घरमा पुग्दा अगाडिपट्टि ढोका बन्द रहेको र पछाडिबाट हात छिराएर चुकुल खोली भित्र पसेकाे बताएकी थिइन् ।
कोठामा पुग्दा सुदीक्षा झुण्डिरहेको र उमेश लडिरहेको देखेको उनकाे बयान थियाे । तर, उनले सो कुरा प्रहरीलाई खबर गरिनन् । घटनाबारे सोही हाउजिङमा बस्दै आएका पूर्वप्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भवीन्द्र मल्लले प्रहरीलाई जानकारी दिएका थिए ।
भिल्ला कोलोनीको ‘२४ डी’ नम्बरको घरभित्र उमेश र सुदीक्षाको शव भेटिएकाे थियो ।
शव ल्रकाउन नसकेपछि आत्महत्या
उमेश केसीको हत्या उनकै श्रीमती सुदीक्षाले गरेको निष्कर्षनजिक पुगेको प्रहरीअनुसन्धान बिस्तारै अर्को निचाेडतिर उन्मुख छ । त्यो हो, सुदीक्षाले उमेशको शव व्यवस्थापन गर्न खोजेको । सुदीक्षाले त्यही योजना साथ आफ्नी दिदीलाई बोलाएको हुनसक्ने ती अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘उमेशको हत्या भएको कुरा शर्मिलाले बिहीबार नै थाहा पाएर सुदीक्षालाई भेट्न पुगेको हुनपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । नत्र पठाओ प्रयोग गरेर उनी राति त्यहाँ किन पुगिन् ? र, पुगेको २ मिनेटमै किन फर्किन् ?’
त्याे भेटमा सुदीक्षा र शर्मिलाबीच उमेशको शव व्यवस्थापन गर्ने विषयमै छलफल भएको हुन सक्ने प्रहरीकाे अनुमान छ । 'बिहीबार राति शव व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि अन्तिममा सुदीक्षाले आत्महत्या गरेको हुन सक्छ', ती अधिकारीले भने ।
सुदीक्षाको गर्भकै विषयमा उनीहरूबीच केही विवाद भएको अनुमान प्रहरीको छ ।
घटनाको दुई दिनअघि उमेशले टोखाको ग्राण्डी अस्पताल र ललितपुरस्थित बीएण्डबी अस्पतालमा शारीरिक परीक्षण गराएका थिए, जहाँ उनले आफ्नो यौनशक्ति कमजोर भएको रिपाेर्ट चिकित्सकसमक्ष गरेका थिए ।
हत्याबारे अनुसन्धानका लागि प्रहरी उनीहरू दुवै जनाको आईफोन प्रहरी प्रधान कार्यालयको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको थियो । तर, डिजिटल फरेन्सिक ल्याबले पनि उनीहरू दुवै जनाको लक खोल्न नसकेको जनाएको छ ।
उमेश अमेरिकामा रहँदा श्रीमती सुदीक्षा टाेखास्थित माइतीमै बस्थिन् ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, माघ ४, २०७७, १७:५१:००